Dutchtown တွင်စည်းရုံးရေးအရင်းအမြစ်များကိုပိတ်ဆို့ရန် Plug In • DutchtownSTL.org
စည်းရုံးရေးအရင်းအမြစ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက် Plug In
မြှင့်တင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Dutchtown အတွက်စည်းရုံးရေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းများအတွက်တည်ဆောက်ရန်အုတ်မြစ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းထားသည်။
DT2 နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များအတွက်ကူညီပေးသည် Dutchtown ရုပ်ရှင်ည, ရန်ပုံငွေရှာသူများ, စီးပွားရေးပျော်ရွှင်နာရီများနှင့်အခြား။ DT2 ၏မစ်ရှင်အကြောင်းလေ့လာပါ dutchtownstl.org/dt2.
အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန်အတွက် Dutchtown Growth Manager ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် UrbanMain နှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု4 + 1 အမှတ်ချဉ်းကပ်နည်း
Dutchtown CID သည် Dutchtown ၏အဓိကစင်္ကြံများ (South Grand, Meramec နှင့် Virginia) ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးအုပ်ထားသောအထူးအခွန်ကောက်ခံသည့်ဒေသဖြစ်သည်။ အခွန်ဒေါ်လာကိုခရိုင်အတွင်းသုံးစွဲရမည်ဖြစ်သော်လည်း CID ၏မစ်ရှင်မှာရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးတိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။ CID မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်ပါ ဦး dutchtownstl.org/cid.
Dutchtown Justice Alliance သည်မဲဆန္ဒရှင်များအားပညာရေး၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်ပညာရေး၊ တရားမျှတမှုအပါအ ၀ င်နိုင်ငံသားများ၏လှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် Dutchtown သို့တန်းတူညီမျှမှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးရန်အာရုံစိုက်သည်။ Facebook ရှိ Dutchtown Justice Alliance ကိုလိုက်နာပါ.
DutchtownSTL သည်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပြန်ပြီးစုဆောင်းသည် အရင်းမြစ်များ DutchtownSTL.org၊ လူမှုမီဒီယာလိုင်းများနှင့်အခြားနေရာများမှတစ်ဆင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အစုရှယ်ယာများ။
Dutchtown ကော်မတီများသည် Dutchtown ရှိရပ်ရွာလူထု၏ပါဝင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်သည်။ ကော်မတီများတွင်ဒီဇိုင်း၊ စီးပွားရေးအတက်ကြွမှု၊ မြှင့်တင်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပိုမိုရှာဖွေရှာဖွေပါ Dutchtownstl.org/committees.
DSCC သည် Dutchtown မြို့ရှိရပ်ရွာလူထု၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု၊ အိမ်ရာတည်ငြိမ်မှုနှင့်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများမှတဆင့်ရပ်ကွက်အတွင်းမှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားအားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ အလည်အပတ် ဒိန်းမတ် ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
၏တစိတ်တပိုင်း STL အပြန်အလှန်ကူညီမှု၊ စည်းရုံးသူများ၊ ကုသသူများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ အသိုင်းအဝိုင်းခေါင်းဆောင်များကွန်ရက်နှင့်နေ့စဉ်လိုအပ်နေသူများကိုအိမ်နီးချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတူတကွစုရုံးနေသည်။
အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ
အဆိုပါ Block Units ၏အဖွဲ့ချုပ် စိန့်လူးဝစ္စအသိုင်းအဝိုင်းမှနေထိုင်သူများကိုသူတို့၏ရပ်ကွက်များတိုးတက်အောင်ကူညီပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှစ၍ Urban အဖွဲ့၏အရန်၊ ဖက်ဒရေးရှင်းသည်စိန့်လူးဝစ္စareaရိယာ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကူညီသည့်အောက်ခြေလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ St.Louis လူထုအဖွဲ့အစည်းများအသင်း စိန့်လူးဝစ်တစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးမျိုးသောရပ်ကွက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပေါင်းစည်းမှုသည်၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့များကိုအထောက်အပံ့နှင့်ရပ်ရွာအခြေပြုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။
အဆိုပါ CSB St. Louis ၏မြို့ပြ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောပြmanagingနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရှင်းလင်းသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ဖတ်ပါ နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှလမ်းညွှန်.
အကောင်းဘက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသကိုသန့်ရှင်း၊ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပိုမိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်အိမ်နီးချင်းများကိုပညာပေးခြင်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့်စိန့်လူးဝစ္စတွင်ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ သင်၏စုစည်းရန် Brightside နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေး.
ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှလမ်းညွှန် အမှိုက်များ၊ လမ်းများ၊ ပြproblemနာများနှင့်အခြားပြwithနာများကိုမည်သို့အစီရင်ခံရမည်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့် CSB အစီရင်ခံစာမည်သို့တင်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အခြားပြissuesနာများကိုမည်သို့အစီရင်ခံရမည်ကိုလေ့လာပါ လမ်းညွှန် အချို့သောအခြေအနေများတွင်ရဲနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်းအတွက်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြနှင့်အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ၏အခန်းကဏ္ about၊ နိုင်ငံသားများနှင့်မြို့ဝန်ဆောင်မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုအကြောင်းလေ့လာပါ အဆိုပါ NIS မှ In-depth လမ်းညွှန်.
DutchtownSTL သည်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန်အတွက်လမ်းညွှန်များကိုဖန်တီးနေသည်။ အလည်အပတ် dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကြည့်ဖို့။
ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အတွက်တစ်နေရာတည်းဆိုင်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောတာဝန်ရှိသူ၊ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ အရေးပေါ်မဟုတ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာများကိုဆက်သွယ်ပါ။ mark ။ dutchtownstl.org/resources တစ်နေရာလေးကိုရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်သည်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 22nd, 2020 .
ဒိန်းမတ် သင်၏လုပ်ကွက်ကိုစည်းရုံးပါ။ စည်းရုံးရေးအရင်းအမြစ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက် Plug In